နာနတ်သီး ထမင်းကြော် | Wutyee Food House
« ကြက်သား ဒန်ပေါက်
သင်္ကြန် အတွက် ရွှေရင်အေး »
April 7, 2012 by chowutyee နာနတ်သီး ထမင်းကြော်
ထိုင်းစတိုင် နာနတ်သီး ထမင်းကြော်လေးပါ။ နာနတ်သီးရဲ့ အချိုအရသာနဲ့ ကြက်သား၊ ပုဇွန်ရဲ့ အရသာပေါင်းစပ်မှုကြောင့် အလွန်စားလို့ကောင်းပါတယ်။ စားချင်စဖွယ်လည်း ကောင်းပြီ လုပ်ရတာလည်း လွယ်တာမို့၊ လုပ်နည်းကို ကြည့်လိုက်ရအောင်…
၁။ ချက်ပြီသား ထမင်း – ၃ယောက်စာ
၂။ နာနတ်သီး – ၁လုံး (မှည့်ရမည်)
၃။ ကြက်ရင်ဗုံသား – ၁၀ကျပ်သား (အတုံးသေးလေးများ တုံးပါ)
၄။ ပုဇွန် ဘော်ကျိဒ် – ၁၀ကျပ်သား ( အခွံနွှာပြီ အတုံးသေးများ တုံးပါ)
၅။ ပုဇွန်ခြောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းစာ
၆။ ငါးငံပြာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၇။ ပဲငံပြာရည်(အကြည်) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၈။ သကြား – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၉။ ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၁၀။ ကြက်သွန်မြိတ် – စည်းတ၀က် (ပါးပါးလှီးပါ)
၁၁။ နံနံပင် – အနည်းငယ် (ပါးပါးလှီးပါ၊ အပေါ်မှ ဖြူးရန်)
၁၂။ ငရုတ်သီးထောင့်ရှည် – ၁ထောင့် (အစေ့ထုတ် ပါးပါးလှီးပါ၊ အပေါ်မှ ဖြူးရန်)
၁၃။ ၆။ ကြက်သွန်နီ – ၁လုံး (အ၀ိုင်းပါးပါးလှီးပြီ ကြော်ထားပါ)
၁။ မချက်ခင် နာနတ်သီးကို အလယ်မှ ထက်ပိုင်း ပိုင်းလိုက်ပါ။
၂။ ပြီလျှင် နာနတ်သီး အတွင်းသားကို ဓားဖြင့် ပတ်ပတ်လည် လှီးကာ ဇွန်းဖြင့် ကော်ထုတ်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီမှ ထိုနာနတ်သီး အသားများကို အတုံးလေးများ တုံးပေးပါ။
၁။ အရင်ဆုံး ကြက်သား နှင့် ပုဇွန်ကို ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ) စီဖြင့် နုယ်ထားပေးပါ။
၂။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း)ကို ထည့်ပြီ ဆီပူလာလျှင် ကြက်သား၊ ပုဇွန်များကို ထည့်ကြော်ပေးပါ။
၃။ ကြက်သား၊ ပုဇွန် ကျက်ပြီဆိုမှ (ထမင်း၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ငါးငံပြာရည်၊ ပဲငံပြာရည်၊ သကြား) တို့ဖြင့် သမအောင် ရောမွှေလိုက်ပါ။
၄။ ပြီမှ နာနတ်သီး၊ ကြက်သွန်မြိတ်များ ထည့်ပြီ ၂မိနစ်၊ ၃မိနစ်ခန့် ထမင်းကြော်ကို ဆက်ကြော်ပေးပါ။
၅။ ပြီနောက် မီးပိတ်ပြီ နာနတ်သီးထမင်းကြော်များကို နာနတ်သီးထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါ။
၆။ ထို့နောက် အပေါ်မှ နံနံပင်၊ ငရုတ်သီးထောင့်ရှည်၊ ကြက်သွန်ကြော်များဖြူး၍ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
on April 7, 2012 at 8:24 pm | Reply မြတ်
မြင်တာနဲစားချင်နေပြီ ၊ အရသာလည်းအရမ်းကောင်းမှာဘဲနော်၊
အခုတော့ စားပြီ ပါဆယ်ပါဆွဲသွားတယ်နော်
on April 9, 2012 at 4:30 am | Reply chowutyee
Thanks Ma Myat!
on April 8, 2012 at 7:22 am | Reply ခင်ယမုံ
on April 9, 2012 at 3:21 am | Reply Su Myat
on April 9, 2012 at 4:32 am | Reply chowutyee
Plz try it sis !😀
on April 10, 2012 at 6:24 am | Reply nandar
ညီမလေး …အမ ထိုင်းဆိုင်မှာသွားစားတာ စားလို့ ကောင်းတယ်…
ညီမ ကြော်တာလေးက ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်…
on April 10, 2012 at 9:09 am | Reply Cho Wut Hmone
mike hla gyi lar…a pyan sar bae…eat chin tal🙂
on April 30, 2012 at 8:41 am | Reply hlahla
good to read and make more new way. like very much.
on May 2, 2012 at 11:24 am | Reply chowutyee
Yeah I will sis.. Thanks you too
on May 10, 2012 at 3:01 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] April 7, 2012 နာနတ်သီး ထမင်းကြော် […]